बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा « Pariwartan Khabar
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा
17 November, 2019 3:37 pm
क्यान्सर रोगको उपचार गर्न यहाँ आउने जो कोहीले आईतबारबाट पालो नपाएर निजी अस्पताल धाउनु नपर्ने भएको छ। यहाँको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले आज आईतबारदेखि विस्तारित स्वास्थ्य सेवा शुरु गरेसँगै साँझको समयमा अस्पतालमा नै न्यून अतिरिक्त शुल्क तिरेर उपचार गर्न पाउने भएका छन्।
अस्पतालको नियमति सेवामा बिरामीको चाप हुँदा पालो नपाएर बिरामीले चर्को शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य हुनु परेको थियो। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्यका अनुसार नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बिहान ७ देखि दिउँसो २ः३० बजेसम्म बहिरङ्ग टिकट काटिन्छ भने त्यसपछि तीन घण्टा विस्तारित स्वास्थ्य सेवाका लागि टिकट काटिने छ। गर्मी महिनामा यो समय एक घण्टा थपिनेछ।
विस्तारित सेवामा बहिरङ्ग टिकट नेपाल सरकारले तोकेअनुसार केही थप लाग्नेछ भने रेडियोलोजी, प्याथोलोजी, श्ययालगायतमा थप शुल्क लाग्नेछैन। विस्तारित सेवामा शल्यक्रियामा नियमितभन्दा ५० र रेडियोथेरापीमा २५ प्रतिशत बढी शुल्क लाग्ने आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार अस्पतालको नियमित सेवामा सबैभन्दा महङ्गो शल्यक्रियाको रु ३० हजार पर्ने गर्दछ।
सोही शल्यक्रिया विस्तारित सेवामा गर्दा रु. ४५ हजार पर्दछ भने बाहिर निजी अस्पतालमा गर्दा रु. दुई लाखसम्म पर्ने गर्दछ। शल्यक्रियापछि र अघि अस्पतालमा हुने अन्य केही सेवामा बाहेक अतिरिक्त शुल्क नहुने हुँदा बिरामीलाई बाहिरको तुलनामा निकै कम शुल्क लाग्ने आचार्यको भनाइ छ। बिरामीको चाप नियमति रूपमा धान्न नसकेपछि पालो कुर्न र निजीमा धाउनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विस्तारित सेवा शुरु गरिएको हो।
अस्पताल स्थापना हुँदा अस्पतालका चिकित्सक, कर्मचारीलाई आकर्षक सुविधा दिएर अस्पतालमा मात्र काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको थिएन। आचार्यले यस सेवासँगै बिरामीले सुविधा र चिकित्सक कर्मचारीले अतिरिक्त पारिश्रमिक पाउने बताए। सबै विभाग नियमित सञ्चालनका लागि पालो मिलाइएको उनको भनाइ छ। अस्पतालले शिक्षण अस्पताल, सिभिल, गङ्गालाल र धरानको नमूनालाई हेरेर यहाँको व्यावहारिक अवस्थासमेतलाई मनन गर्दै नयाँ ढङ्गले विस्तारित सेवा शुरु गरेको हो।
बीस वर्षअघि चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको यस अस्पतालमा देशभरका र भारतीय सीमा क्षेत्रबाट बिरामी उपचारका लागि आउने गर्दछन्। गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालबाट एक लाख ४२ हजार ३७७ जनाले सेवा लिएका छन्। तीमध्ये सात हजार ८९३ जनाको क्यान्सर पहिचान भई उपचार भइरहेको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा एक लाख २१ हजार १३५, आर्थिक वर्ष ०७३र७४ मा एक लाख १३ हजार ७९९ र आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा एक लाख १२ हजार १७६ जनाले सेवा लिएका थिए।